सकिए प्रचण्ड, छक्किए माधव ! -
सकिए प्रचण्ड, छक्किए माधव !
काठमाडौ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उत्पन्न सत्ता सङ्घर्ष नाटकीय ढङ्गले नयाँ मोडमा पुगेको छ । केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन प्रचण्डले गरेको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ । यो अभियानमा सहभागी भएका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनाललाई नराम्रोसँग जिल्याउँदै प्रचण्डले केपी ओलीसँग सम्झौता गर्नुभएको छ ।